Igumbi le-Lemon yeholide ye-Laringa - I-Airbnb
Igumbi le-Lemon yeholide ye-Laringa
Ikamelo e-i-villa ibungazwe ngu-Chiara
U-Chiara uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-90% wezivakashi zakamuva.
I-Enchanting Villa emazingeni ama-3 enhliziyweni yeGozo iphelele ngakho konke ukunethezeka ...
I-villa yakhiwe ngale ndlela elandelayo:
Indawo yokungena eTerace enamachibi okubhukuda nendawo yokuphumula, igumbi lokuphumula langaphakathi / indawo yokungena kanye nendawo yasekuseni.
Igumbi le-P.terra Suite Cherry, igumbi lokugezela langasese kanye ne-balcony
1st floor 3 amagumbi okulala anethezekile futhi avulekile.
Igumbi le-Triple Strawberry eline-balcony, igumbi lokugezela le-ensuite
Igumbi likalamula eliphindwe kabili, elinefasitela elinegumbi lokugezela langasese kodwa langaphandle
Igumbi le-Blueberry elinombhede ophindwe kabili, iwindi eline-en-suite yokugezela.
2nd p terrace / BBQ / INDAWO YEZINGANE
Itholakala eduze nezindawo ezibalulekile ezithakazelisayo nezidingo, njengezitolo ezinkulu, izitobhi zamabhasi, amakhemisi, izindawo zokudlela nezikebhe, le ndawo iba indawo ekahle yokuchitha amaholide amnandi nabangane nezihlobo.
Ukungena endaweni yethala elingaphandle elinedamu lokubhukuda nendawo yokuphumula lapho ungajabulisa khona ulwanga lwakho ngesidlo sasekuseni esicebile sokuzenzela kanye nemikhiqizo evamile yaseSicilian.
Indawo yokungena ekhanyayo yangaphakathi, Indawo yokungena / ibhulakufesi / ikhishi.
* Ikhishi lisetshenziswa ngokuphelele izivakashi zethu ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Kubalulekile ukugcina yonke into ihlanzekile njalo ingcolile ukuze kuhlonishwe wonke umuntu.
Igumbi ngalinye linetafula elibekelwe isikhathi sokuhlala, ubhasikidi womuntu onezitsha ezihlala zihlanzekile futhi zifakwe amagciwane kanye nendawo yomuntu siqu esiqandisini enegama legumbi. * ngokuhlonipha yonke imithetho kanye nokusebenzisana kwakho singagcina izikhala zakho zihlanzekile futhi zihlanzekile njalo !!!
Isidlo sasekuseni se-Buffet € 9 umuntu ngamunye ngesicelo kuphela.
Ibhulakufesi elincane € 6 umuntu ngamunye ngesicelo kuphela.
Ikamelo ngalinye linezindlu zangasese zangasese, insipho, amathawula okugeza namathawula okubhukuda (ngesicelo u-€ 3 wokuwashwa)
kukhona futhi kungenzeka imibhede eyengeziwe izingane njengoba amakamelo ivulekile kakhulu.
* Isihlalo sokugeza kanye nesinciphisi sezindlu zangasese sezingane uma ucela.
New futhi engavamile ukuthi LARINGA HOLIDAY B & b izipesheli epikinikini yethu Experience esakhiwa ngo ngokubeka onawo ephelele at: ubhaka for epikinikini ukuqedela ngesevisi etafuleni abantu 4, isibani nge isibani, epikinikini ingubo, itafula resealable, nezitsha, cooker amatende. itende ukuze ujabulele ngokugcwele imvelo kanye nezikhathi ezinhle kakhulu zesiqhingi.
Sidale amaphakheji ambalwa e-PicNic ukuze sikwazi ukuhlangabezana nazo zonke izidingo zakho * bheka amanani aboniswa Esakhiweni noma cela Ababungazi ngolwazi.
I-terrace yethu ine:
Indawo yokuphumula enamatafula nezihlalo ukuze ujabulele ukudla kwakho.
Indawo enethezekile ngosofa be-Pallet futhi ubuke
wombhoshongo omuhle wensimbi wesonto onikezelwe kuMadonna Di Loreto ngaphambili futhi kude nesiqhingi esihle saseComino.
Indawo yokudlala yezingane: indlu, isilayidi sezingane, amatafula nezihlalo, izincwadi nemibala eminingi, ama-inflatable wezingane echibini
Isevisi ye-Shuttle (bona incazelo esakhiweni)
isevisi yamathikithi esikebhe ye-Comino (buza Ababungazi).
Isevisi yasekuseni ekhokhelwayo yezingane / abadala (buza Ababungazi)
Izinkonzo ezengeziwe zezingane zamagumbi
4.87 · 16 okushiwo abanye
indawo ethule kakhulu futhi enokuthula eduzane sinesonto elibabazekayo elinikezelwe ku-Our Lady of Loreto ngesitayela se-Lombard-Gothic umbhoshongo wayo wensimbi uyabonakala futhi ethafeni lethu.
Ukutholakala kwethu ngesikhathi sokuhlala kwakho kwanoma yimiphi imibuzo noma izidingo kuzosebenza amahora angama-24 ngosuku
Hlola ezinye izinketho ezise- Għajnsielem namaphethelo